Gbasara Anyị | Doc.com
Doc.com bidoro na ebumnuche ịnye ụwa ụdị nlekọta ahụike bụ isi na -akwụghị ụgwọ nke na -adigide ma ọ dabereghị na usoro ahụike ọdịnala dị na akụkụ ụwa niile.
Ruo ugbu a Doc.com enyela ọrụ nlekọta ahụike na -akwụghị ụgwọ puku kwuru puku ndị ọrịa n'ihe karịrị mba iri abụọ na -emeziwanye ndụ ha. Enwetara nke a site na imepụta ụdị azụmaahịa azụmaahịa iji mee ka “Nlekọta Ahụike Ntọala n'efu” dịịrị onye ọ bụla nwere ohere na kọmpụta ma ọ bụ ama.
Charles Nader gosipụtara ndị nkuzi ya ụdị azụmaahịa ọhụrụ na mmemme Blitzscaling nke Stanford nke gụnyere Ried Hoffman, onye guzobere Linkedin na Chris Yeh, onye ode akwụkwọ azụmaahịa ama ama na onye isi ike. Mgbe ọ nwetasịrị nzaghachi dị mma yana Chris Yeh kpọrọ ụdị telemedicine ngwaahịa 10X, ụlọ ọrụ ahụ wepụtara ego iji zụlite data blockchain ya wee gbasaa ọrụ na mba ndị ọzọ na mpụga Mexico. Nke a nyere ụlọ ọrụ ahụ ike ịgbasa ihe karịrị mba iri abụọ na Latin America ma bulie mmepe ya iji nye onyinye ngwaahịa siri ike, ndị ahịa nọ n'ime ya, yana kwalite ma melite ụlọ ọrụ dị ka ịzụta aha Doc.com na ịbawanye ya. mmepe teknụzụ na azụmaahịa na ngalaba ndị ọzọ nke oghere ahụike. Doc.com gbasaa ọrụ ya site na ịgbakwunye nnyefe ọgwụ n'ụlọ na Mexico na ịghọ onye nkesa maka ọgwụ na Latin America. Edere Charles Nader, onye isi oche nke Doc.com na mkpuchi nke akwụkwọ akụkọ Forbes ugboro abụọ na -anọchite anya Doc.com. Magazin ahụ zoro aka na ụlọ ọrụ ahụ dị ka unicorn Latin America ma akpọọla ya aha n'ọtụtụ akwụkwọ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
Taa, Doc.com na -enye ọrụ “Free Basic Healthcare”, yana ọrụ ọnụ ala dị ala, n'ihe karịrị otu narị asụsụ n'ụdị ederede yana telemedicine vidiyo Bekee na Spanish site na Doc App, n'ihe karịrị mba iri abụọ ọkachasị na Latin America. na US nwere atụmatụ mgbasawanye na ụwa ndị ọzọ.
Ndị ahịa gụnyere ụlọ ọrụ ịnshọransị, Telecom, na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ dị iche iche. Doc.com ghọkwara onye ọrụ gọọmentị na ndị na -enye ọgwụ mgbochi n'oge ọrịa na -efe efe iji nye ụwa ọgwụ Covid. Site na mmekorita ndị a, yana nkwado nke gọọmentị. Doc.com na -agbakwunye uru n'onyinye ngwaahịa ya iji nyere ndị nọ na mkpa aka n'oge ọrịa.
Site n'ịghọta iru teknụzụ nke na-agbanwe ụwa anyị bi na ya, Doc.com agwakọtala teknụzụ wee mepụta ụdị azụmaahịa ọhụrụ nke na-eri nri sitere na nyocha ọrịa, ngọngọ akụ na ụba blockchain, telemedicine na ahịa ọgwụ iji nye ndị ọrịa nwere onwe ha n'efu. ọrụ nlekọta ahụike. Ọ gbapụtala usoro na -adigide onwe onye nke na -abụghị naanị ọrụ dị ka ngwa sayensị maka abamuru nke mmadụ, kamakwa ọ na -enye ndị nọ na mkpa nọ n'akụkụ ụwa niile ihe enyemaka anyị kwenyere na ọ bụ akụkụ kachasị mkpa nke ndụ… Ahụike.
N'ihi na enweghị ahụike, bụrụ ahụike ahụike ma ọ bụ ahụike anụ ahụ; Ndi mmadu enweghi ike nweta ihe kacha mma.
Nlekọta ahụike efu n'efu maka mmadụ niile ... Ikike mmadụ ... A na -emetụta ndụ nke ọma.
Weebụsaịtị mepụtara Lou.